XERANTEMUM: SII KORDHAYA LAGA BILAABO ABUURKA, BEERITAANKA IYO DARYEELIDDA WARSHAD DHUL FURAN (SAWIR) - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo abuuro oo u korto xeranthemum (ubax la qalajiyey)
Xerantemum waa ubax sanadle ah oo aan qabyo ahayn, taas oo muddo dheer loo adeegsaday sidii dhirta ornamental ee qaabeynta muuqaalka iyo qurxinta sariiraha ubax. Baro ku saabsan sharaxaadda dhirta ubaxa iyo habka koritaanka guriga.
Xerantemum waa dhir hal sano ah oo ka mid ah qoyska Compositae. Waxaa lagu koray guriga dhammaadkii qarnigii 18aad ee koonfurta Yurub, laakiin ugu dhakhsaha badan waxay ku faaftaa aduunka oo dhan, iyada oo ay ugu wacan tahay iyada oo aan la qabin xaaladaha sii kordhaya iyo quruxda aan caadi ahayn ee sii socota xitaa ka dib qalajinta. Ubaxa waxaa lagu gartaa joogitaanka stem erig ah oo gaari kara height ah 60 cm. On asliga ah, dhuuban, caleemaha dheer lanceolate ayaa si kale loo beeray. Waxay gaaraan qiyaastii 3 cm dhererka iyo 0.5 cm width. Jiriddu waxay daboolaysaa fiilooyinka cad. Inflorescences waxay leeyihiin qaabka dambiilaha, oo ay matalayaan xayawaanno. Noocyada ornamental ee dhirta leh ubaxyada ama ubaxyo laba-jibbaar ah waxay noqon karaan ubax cad, dhar guduudan ama ubax ah. Ubaxku waa yar yahay, oo aan ka badnayn 3 cm dhexroorka, wuxuu ku jiraa bilowga Luulyo ilaa Sebtembar. Ubaxa waa mid saaxiibtinimo leh. Bisaylka abuurka on ubax dhacdaa dhamaadka xagaaga. Abuurtani waa mid yaryar, grayish, hal garaam in ka badan 700 gundhig ah oo xooggan, waxay ku sii jiri karaan illaa 3 sano. Cudurka xeran wuxuu leeyahay 6 nooc, laakiin isticmaalka dhirta "floriculture" oo kaliya sanadkiiba xertetemum.
Qaybinta iyo degaanka
Guryaha xerandtemum waa koonfurta iyo galbeedka Yurub, Mediterranean, Balkanka iyo Aasiyada Aasiyada yar. Dhirta ayaa si fiican ugu kobcaya curiyaha, jimicsiga duufaanka, waxay door bidaan dabaclaha qalalan iyo buuraha hoose, waxay sidoo kale laga heli karaa carrada bacaadka ah.
Baro ubaxyada la qalajiyay sida amaranth, celosia, helihrizum, qaboojiyaha iyo tansy.
Xeranememum waa geedka caanka ah oo badanaa waxaa loo isticmaalaa naqshada muuqaalka. Waxay ku qurxiyaan ubaxyo, dhagaxyo, iyo sidoo kale loo isticmaalo abuurista xudduudda nololeed. Thanks to inflorescences terry dhalaalaya, xeranthemem u ogolaanaya inay qurxiyaan wax kasta oo territory. Warshadda waxaa loo beeray si gooni gooni ah iyo isku dhafka ubaxyada kale, abuurista quruxda quruxda badan. Xerantemum waxaa lagu daraa astrantia, salvia, yarrow. Warshad waxaa badanaa loo doortaa sida quruxda ubaxa, sida ubaxa waa mid fudud in la joogteeyo oo aan u baahnayn xaalado gaar ah oo sii kordhaya. Intaa waxaa dheer, ka dib dhamaadka ubax, wuxuu sii wadaa inuu ka farxiyo isha.
Badanaa, xerada ayaa la koray si ay u gooyaan dabeecadaha, bouquets ee foomka cusub oo la qalajiyey. Thanks to xaalad aad u fiican ee ilaalinta, ubaxa dhuujiyay ka dib jarida, iyada oo aan lumiyo midabka burooyinkeeda iyo ilaalinta qaabka ubaxa. Si loo xiro xeranimada sida ugu macquulsan, waxaa la gooyaa wakhti goorta aan si fiican loo furin.
Waxa kale oo ku jira floristik badanaa waxay isticmaalaan haramaynta, teasel, boodhka cum, gypsophila, heelipterum, asinhagus, pinkate asparagus, cochia, dharka gabadha iyo xayawaanka cagaaran.
Ka dib markii dhirta la jaro, waxaa lagu ururiyaa rucubood iyo lagula talinayaa in la saaro burooyinkeeda. Si aad u qallajiso xerranem waa inay ahaataa qolal madow, qallalan oo qallalan - kaliya kiiskan ayaa awood u yeelan doona inuu badbaadiyo dhirta. Kserantemum ee foomka qalalan waa awooda wakhti dheer, ugu yaraan 2 sano si loo ilaaliyo midab dhalaalaya iyo qaabka burooyinkeeda.
Ma taqaanaa? Waa suurtagal in la sameeyo ubax qalalan si cad, sababtoo ah waxay isticmaalaan xal of hydrochloric acid. Wixii diyaargarowga waxay qaadataa hydrochloric acid (1 qayb) iyo biyo (12 qaybood), wax walbana si fiican u qallaji oo googo gogol ah jarjar geli 4-5 ilbiriqsi. Next, si tartiib ah u gariiray oo la qalajiyey.
Inta badan kseranttemum isku dhafan ee bouquets leh ubaxyo la qalajiyey kale, sanadlaha iyo dilka ah. Si ubaxyada qallalan sanadka, kuwaas oo lagu dari karaa bouquet leh xeranthemum, waxaa ka mid ah helihrizum, heelipterum, kermek. Ka mid ah dilka ah ee la isku dhejiyey dhirta, anafalis, gypsophilus, yarrow, lafdhabarta, lafil iyo astilbe ayaa kala duwan. Rikoodhada suufka waxaa lagu dari karaa boomsadaha, firilayda beerta qurxinta - breeze iyo lagurus, bouquet ayaa si fiican u dabooli doona lunaria iyo physalis.
Koraaya iyo daryeeli dhirta
Xerantemum waa ubax aan qabin, sidaas darteed waxaa lagu kori karaa guriga iyada oo aan wax dhibaato ah. Ka faahfaahin faahfaahin dheeraad ah meesha laga gooyo iyo sida loo daryeelo warshad ornamental.
Sidoo kale akhri wax ku saabsan ubaxyada aan caadiga ahayn sida baqdinta, boodhka, nepentes, orchis, hoya, camellia iyo amorphofallus.
Kseranttemm koritaanka wadada, waa lagama maarmaan in la siiyo qadar ku filan oo iftiinka qorraxda, sidaas darteed warshadda waa in lagu beeray dhinaca qoraxda ah ee goobta, ama aag leh penumbra iftiin. Marka laga hadlayo geedo sii kordhaya gudaha, ku rid weelka daaqadda koonfureed. Awoodda laga soocay qulqulka, ilaa 10 cm ee dhererka, waxaad ku beeran kartaa abuurka dheriga, ugu yaraan 9 cm dhexroor.
Marka sii kordhaya geedo of xseranemum gudaha, weelka waa in la buuxiyaa leh iftiin, dabacsan, ciid qoyan, waxaa ka wanaagsan inaad ka iibsato dukaanka khaaska ah. Wixii iibsashada substrate ku haboon ee dhirta ubax. Xerantemum ee bannaanka u furan si ay u koraan on carrada nafaqada iftiinka. Well ku haboon beerista warshad this ciidda bacaadka ah iyo carrada ciid leh leh acidity dhexdhexaad ah.
Ogow waxa bacrimin iyo bacriminta potash ku wanaagsan yihiin dhirta.
Si kobcinta formation of burooyinkeeda, waxaa lagu talinayaa in ay ku quudiyaan dhirta leh Bacriminta adag oo adag oo leh content sare ee fosfooraska iyo potassium. Bacriminta noocan oo kale ah waxaa laga iibsadaa dukaamo khaas ah, oo loo isticmaalo sida ku qoran tilmaamaha, kaas oo lagu muujiyay taangiyada bacriminta.
Xerantemum waa warshad abaarta u adkeysata, sidaas darteed huurka hawada iyo waraabinta ma aha mid muhiim ah. Waraabinta dhirta waxaa lagula talinayaa oo kaliya geedi socodka geedo sii kordhaya iyo ka dib markii ay beerto in dhulka u furan, ilaa waqti sida ugu dambeyntii qaadataa xididka. Waqtigaa, ubaxa si joogto ah u waraabiyo, ka dib markii dhoobo dhoobo. Si buuxda u joojin waraabinta ka dib markii dhirta ay kordhisay tirada cagaaran.
Waa muhiim! Ubax waa la waraabin karaa muddada ubax ee keli ah haddii ay dhacdo abaaro dheer oo kuleyl ah.
Si loo abuuro abuurka isla mar qudha, heerkulka waa in uu ahaado heerka +20 digrii. Waxaa haboon in la xusuusto in miraha ay u dhiman karaan inta uu dhaxan yahay iftiinka. Warshadu waa qabow u adkaysata, sidaas awgeed waxay u adkeysan kartaa isbeddelka heerkulka illaa +5 digrii. Tan iyo ubax sanadkiiba, waxaa la beeray for 1 xilli, taas oo ah, jiilaalka waa laga saaray. Haddii miraha aan la soo ururin waqtigii loogu talagalay oo lagu dhuftay ciidda, markaa sannadka soo socda wuxuu is-abuuri karaa inuu dhaco, haddii aanay dhiman xilliga jiilaalka. Jeexitaanka abuurka oo hoos u dhacay ciidda xilliga dayrta waxaa la gaari karaa oo keliya haddii xeronetemum uu ku baxo gobollada koonfureed oo leh qaboobaha diiran.
Waxaa macquul ah in dacaayad ubax leh abuur. Si ay u koraan xeran waa ugu waxtar badan habka rassadny, sidaas darteed marka hore abuur waxaa lagu beeray weel, kaas oo lagu meeleeyo meel wanaagsan oo iftiin leh. Beeridda ayaa dhacda dhamaadka Maarso, iyo geedo beerto ee dhulka furan waxaa la soo saaraa bilaha ugu horeeya ee xagaaga. Beeridda abuurka ah ee dhulka la furay ayaa sidoo kale lagu dhaqmaa: kiiskan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero bartamihii bishii May, marka dhibco xoog leh ee heerkulka habeenkii laga reebo. Haddii miraha lagu beeray dhulka furan, markaas aagga waxaa lagu daboolay filim ka hor muuqaalka caleemaha ugu horeeya. Wixii beereed ee carrada waxay sameeyaan shabeel yar (ilaa 3 cm qoto dheer), carrada ku rusheeyaa on top.
Waa muhiim! Waa in la fahmo in marka geedo sii kordhaya ee bannaanka u furan, si ay u gaaraan ubax ah xertemum waa suuragal kaliya in bishii hore ee xagaaga.
Marka koritaanka geedo ee guri dabaq ah, awoodda waxaa loo doortay ma qoto dheer, waxaa ka buuxsamay substrate la iibsaday ilaa 8 cm ee height, iyo miraha lagu beeray si qoto dheer ah oo aan ka badnayn 0.5 cm. Ka weyn daboolida filim ama dhalo quraarad. Geedo geedo waxay u baahan yihiin khafiifinta labadaba marka la koray gudaha gudaha iyo dibedda. Xaaladda geedo sii kordhaya ee weelasha waaweyn, oo ah geedo yaryar ayaa quustay 3 gogo 'kasta, iyaga oo ku dhex jira dheji kala duwan oo leh dhexroor ugu yaraan 9 cm oo ay weheliyaan dhoobo dhuleed. Marka koritaanka wadada, geedo ma quusin, ka dibna meesha waxaa lagu daboolay rooga cufan ee xertemismka.
Dhibaatooyinka suurtagalka ah ee sii kordhaya
In geedi socodka kordhinta xerranem ay soo gaarto dhibaatooyinka soo socda:
biqilka saboolka ee geedo leh oo aan u hoggaansanaan heerkulka;
biqilka si tartiib ah iyo koritaanka cagaaran oo aan u hoggaansamin waraabinta joogtada ah;
khudrada ah ee warshad qaangaar ah oo leh caleemo cad oo ciriiri ah, ubax yar, ama maqnaanshahooda;
dhammaadka degdeg ah ee ubax maqnaanshaha dharka.
Cayayaanka, cudurrada iyo kahortagga
Warshadu waa mid u adkaysata cudurrada kala duwan iyo cayayaanka, laakiin mararka qaarkood waxay ku xanuunsan karaan roobab culus ama waraabiya, taas oo ka xanaajisa cirridka iyo xididdada. Si looga hortago in tani dhacdo, waxaa lagama maarmaan ah in laga fogaado qulqulinta ciidda, maadaama xerada ayan jeclaan lahayn qoyaan xad-dhaaf ah oo jecel in ay sameeyaan iyagoon ku waraabin xitaa maalmaha xagaaga kulul. Suurtagal maaha in la daaweeyo dhirta haddii cayayaanka uu dhacay, sidaa daraadeed waxa fiican in aan loo oggolaan.
Ku noqoshada cayayaanka oo ka muuqda xertemum, waxaa ka mid ah:
Gall Nematode - dixirigga microscopic, kaas oo dejiya asaasiga, dhibaatooyinka sii kicinta ee horumarinta iyo keena dhimashada si dhakhso ah ubaxa. On xididada dhir ay saameeyeen nematode ah, koritaanka huruud ah muuqan, kuwaas oo dhawaan u noqdaan brown. Warshadu waxay sii socotaa kobcitaanka, curlka, nidaamka xididku wuu joojiyaa shaqaynta. Nematode waxay u muuqataa ciid wanaagsan oo qoyan marka heerkulka hawadu ku jirto gudaha + 18 ... +25 digrii. Cayayaanka waa la jabin karaa iyadoo la isticmaalayo kiimiko kiimiko ah sida Mercapthos ama Phosphamide. Waa in loo adeegsadaa sida ku cad tilmaamaha xirmada. Si looga fogaado muuqaalka nematodes on xididada, waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero qoyaanka ciidda, baabi'iyo waraabinta xad-dhaaf ah, ha isticmaalin Bacriminta organic bacriminta organic ee daryeelka ubaxa.
Faashooyinka caleenta - Midges yar oo midab cagaaran ama madow, oo ku quudiya nudaha dhirta, gaar ahaan caleen caleen iyo ubax. Aphids waxay waxyeello u geysataa dhirta, maaddaama ay si deg deg ah u dhufan karaan, sameynta deegaanno badan oo si wayn u degan qaybta cagaaran. Under saameynta aphids, caleemaha ubaxa yihiin deformed, caws ubax dhinta, iyo dhirta dhalinyarada ma istaagaan oo ugu dhakhsaha badan u engegay. Habka ugu fiican ee looga hortago aphids waa: "Aktara", "Tanrek", "Confidor", oo loo isticmaalo sida ku qoran tilmaamaha xirmada. Si looga hortago hareeraha geedka waa in si joogto ah looga saaraa dhirta cawska, baarista dhirta si loo aqoonsado calaamadaha ugu horreeya ee muuqaalka aphids ee ubaxa, iyo sidoo kale in la burburiyo dabiicadaha. Kala baxa caleen.
Ma taqaanaa? Aphids waxay soo saari kartaa dareeraha macaan oo soo jiidata dhirta aad u badan. Sidaa darteed, mararka qaarkood aphids waxaa si gaar ah loogu rakibay dhirta agagaarka anthill.
Xerantemum ayaa qurxin kara sariirtaada ubaxyada xitaa xitaa waxay ku dhammeyneysaa hal-abuurka ku jira bouquets iyo waxyaabo qurxoon. Sababtoo ah fududayn iyo fudayd oo ku saabsan daryeelka ee warshad, si ay u koraan ubax qurxinta guriga ma aha mid adag, natiijada hubaal way ku farxi doonaan.
Siraha iyo qaylo-dhaan ku saabsan baranbaro macaan oo cadaan ah: halkee ayay ka yimaadeen, waa maxay waxa ku saabsan, waxay khatar ugu yihiin dadka
Caaquska xayawaanka - "Ripsalidopsis" (Cactus Easter): sawir iyo daryeel guriga
Sida loo sameeyo quudiye for bakaylaha
Canab sharoobada ah: sifooyinka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Caanaha ugu caansan ee koray on our beeraha digaagga waa digaag Estonian. Guusha laf dhabarka ah ee xaqiiqda ah in shimbiraha loo shubi karo labada ujeeddo ah ee soo saaro hilibka iyo ukunta. Estoniyaanka ayaa la helay iyadoo ay ka dhalatay bacriminta ingiriisiga, jiiska jiiska iyo Fircooniga. Dhammaan noocyadaas waxaa lagu gartaa heerka sare ee waxqabadka, muddada dheer iyo muddada dheer ee ukunta-dhicinta. Read More
Sida loo codsado "Tromeksin" shimbiraha
Doofaarrada shaggy ayaa noqday mid sii kordhaya ee beeralayda Yukreeniyaan.